कैयौं भाइरस मार्ने क्षमता हुन्छ बेसारमा, पढेर जानकारीको लागी सेयर गराै ! | सुदुरपश्चिम खबर
कैयौं भाइरस मार्ने क्षमता हुन्छ बेसारमा, पढेर जानकारीको लागी सेयर गराै !
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्न बेसार उपयोगी हुने सुझाव दिए । यो विषयले निकै चर्चा पायो । वैज्ञानिक पुष्टिबिना प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना पनि भयो ।सामाजिक संजालमा यस विषयमा ट्रोल पनि बनाइए । आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने सन्दर्भमा बेसार प्रयोग गर्न सुझाव दिएको सफाइ दिए ।
‘उदाउँदो कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी रुपमा मानव र पशु स्वास्थ्यमा देखिएको गम्भीर खतरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ र अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक उपचार उपलब्ध छैन । यहाँ हामीले ट्रान्समिसिबल ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस भाइरस (टीजीइभी) लाई अल्फा कोरोनाभाइरस मोडलको रुपमा य्रयोग गर्यौं र टीजीइभीविरुद्ध कक्र्युमिनको एन्टिभाइरल गुणहरुको परीक्षण गर्यौं ।
हाम्रो परीक्षणले देखायो कि निश्चित डोजमा आधारित रहेर कक्र्युमिनले टीजीइभीको प्रसार र भाइरल गतिविधिहरुलाई बलियोसँग रोक्यो । हामीले यो पनि अवलोकन गर्यौं कि कक्र्युमिनले डोज, तापक्रम, र समयमा आधारित रहेर प्रत्यक्ष भाइरसविरोधी क्षमता पनि देखायो अनुसन्धानकर्ताले शोधपत्रमा लेखेका छन् । gnewsnepal.com बाट साभार